Kitaabni ‘Qabsaawaa Seenaan Dagate’ dhihotti magaalaarra ooluufi -
bilisummaa July 21, 2015	1 Comment
Kitaabni ifaajee waggoota dheeraa nagaafate, ‘Qabsaawaa Seenaan Dagate’ mata-duree jedhu jalatti maxxanfamee, Hagayya (August) 1, bara 2015, Minnesotaa, Magaalaalee Lakkuu keesssatti eebbifamee harka dubbiftoota seenuuf imala jalqabuu isaa gammachuu guddaan isinii eera.
Kitaabni seenaa guddaa if-keessaa qabu kun, ‘Qooda Huseen Suraa Qabsoo Oromoo Keessatti Gumaate’ hundee taasifata.
Boqonnaalee 13 fi fuula 387 qaba. Gatiin: $30 (USA).
Namootni Minnesotaa ala jiraattan akkaataan itti argattan fuulduratti ibsama
Tags afaan kitaaba qabsaawaa seenaa
Previous Afaan Oromoo wiirtuu (jiddugala) qorannoo qabaachuu qaba
Next Ibsa Tarkaanfii Waraanaa ABO
Biyya keessatti akkamitti arganna?
Leave a Reply to Oromiya jiitu Cancel reply